Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Amerika Latina tamin’ny Desambra 2012
Amerika Latina · Desambra, 2012
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Desambra, 2012
Mpanoratra Pablo Andres Rivero · Bolivia
Mpanoratra Jenny Cascante Gonzalez · Costa Rica
Mpanoratra Débora Medeiros · Brezila
7D: Miomana Ho Amin'ny Lalàna Vaovoa Mifehy Ny Media i Arzantina
Ny 7 Desambra 2012, hanomboka hanan-kery ao Arzantina ilay lalàna vaovao momba ny Media. Fantatra amin'ny hoe 7D izao ilay daty. Inona no eritreritry ny media, ny governemanta ary ny olom-pirenena tsotra mikasika izany ?
Mpanoratra Renata Avila · Costa Rica
Mpanoratra Susannah Vila · Arzantina
Noafahana ilay Bilaogera Ekoateriana Paúl Moreno
Mpanoratra Daniela Gallardo · Ekoatora
Ny folakandron'ny 3 desambra i Paúl Moreno, ilay Bilaogera Ekoateriana nosamborina fa hoe niditra an-tsokosoko amin'ny firafitry ny solosaina sy ny antonta-kevitra ao aminy no noafahana. Noporofoin'i Moreno manko fa tsy manana ny firafi-piarovana sahaza azy ny tranonkalan'ny governemanta datoseguro.gov.ec [es] hahazoana antontan-kevitra momba ny olom-pireneny.
Mpanoratra Ellery Roberts Biddle · Karaiba
Antonio Rodiles, kaomisera avy amin'ny seha-pifanakalozan-kevitr'ireo manampahaizana miasa tena Estado de SATS [es], dia nafàhana tao Havana tamin'ny Alarobia teo taoran'ny niaretany famonjana nandritra ny telo herinandro. Ny 7 Novembre i Rodiles no navotsotra, niaraka taminà bilaogera maro hafa sy mpisolovava sivily tao amin'ilay nosy, ahitàna an'i Laritza Diversent, bilaogera...